Etu Mmekọrịta si Arụ Ọrụ Webinar Ego | Martech Zone
Wednesday, June 27, 2012 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Jenn Lisak Golding
N’ọnwa June, ndị enyi m na ndị ahịa, Right On Interactive na TinderBox, sonyeere ike iji mepụta egwu usoro webinar banyere otu mmekorita si enweta ego. Right On Interactive, onye nkwado nke Martech Zone, na-enye a ahịa akpaaka ngwọta na-elekwasị anya na mmeri, idebe, na mmekọrịta na-eto eto. TinderBox bụ SaaS sọftụwia ịre ahịa ịntanetị sọftụwia nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta multimedia, atụmatụ ahịa na-ejikọta ọnụ maka atụmanya gị. Ha abụọ nwere nghọta dị ịtụnanya banyere ụlọ ahịa na ahịa, nke ha keere na usoro webinar a.
Nke a bụ usoro 3 nke akụkụ, na-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke ịzụ ahịa na ịzụ ahịa na ntanetị ọ bụla na nkeji iri atọ. Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe dị mkpa site na nnọkọ ọ bụla, mana ị ga-enwerịrị gee ntị n'usoro ịmụtakwu ihe! I nwekwara ike iso mkparịta ụka na Twitter na #revwebseries hashtag.
Nkebi nke 1: Na-ese ihe osise nke atụmanya gị
Ndị a bụ ụfọdụ ntụle ntụle na nnabata site na webinar a:
Onye ị ga-eji oge gị gwa
"Nkuchi nke ahia akpaaka technology na-atụ anya na-abawanye site 50% na 2015." (Mkpebi Sirius)
"50% nke ruru eru na-eduga adịghị njikere ịzụta ozugbo." (Ntụtụ)
Mgbanwe si ụlọ ọrụ na-agwa gị ihe bụ nsogbu gị bụ inyere gị aka idozi nsogbu ndị ị mata
Etu esi enweta ndu bu ihe banyere olile anya
Ogo karịrị nke (na-eduga)
Mepụta nkwukọrịta ahaziri iche, dị mkpa
Ghọta isi mmalite niile maka mgbanwe ndị ọzọ
Ndụmọdụ maka etu esi amalite (ebumnuche, profaịlụ ndị ahịa, azụmaahịa na-eduga)
Gee Akụkụ 1 Ebe a.
Nkebi nke 2: Akara ahụ na-akọ akụkọ
Ekwu okwu banyere kwado ahịa na ahịa ebumnuche
Gbaa mbọ hụ na handoff dị mma ma dị mma ma dị irè
"47% nke B2b marketers na-ekwu na ha ma na-emechi ihe na-erughị 4% nke niile ahịa-eme na-eduga, ma ọ bụ ọbụna na-amaghị nke a metric." (Nyocha Forrester)
"Ndị mmadụ nwere ike ịzụta 12% n'aka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta njikọ mmetụta uche." (Gallup Nghoputa)
"Site na 2020, ndị ahịa ga-achịkwa 85% nke mmekọrịta ha na-enweghị agwa mmadụ okwu." (Nnyocha Gartner)
Iji akara iji chọpụta ma tozuo n'ime
Ọnụ ọgụgụ kwesịrị ịdị iche na ụdị mmekọrịta
Ekwesịrị ịgwọ ọkwa ọ bụla dị iche iche
Ọnụọgụ ahụ na-enye nghọta maka akụkọ ahụ dum - ndụ ndụ nke mmekọrịta
Gee ntị na Nkebi nke 2 ebe a.
Nkebi nke 3: Ka anyị nweta nkeonwe
"B2B ndị na-azụ ahịa dịka 70% site na usoro ịzụta tupu ị kpọtụrụ onye na-ere ahịa." (Mkpebi Sirius)
Kwado ngwaọrụ na mmekọrịta
Ikwu okwu banyere enweghi nsogbu site na ahịa rue ahịa
Nkwanye ugwu, Igha aha, Nzaghachi
Adọta, Nurture, Convert (ahịa / ọrịre ahịa na otu ha si agbanwe)
Ahụmịhe zuru ezu maka ndị ahịa
Iji teknụzụ jikọọ mba na n'ime
Ihe ngbanwe data na-agbanwe
Na-emekọ nso n'ihi mmekọrịta
Gwa otu ogbo okwu
Oge iji nweta nkeonwe na-ewe 70% nke ụzọ site na usoro ahụ
Gee ntị na Nkebi nke 3 ebe a.
Wepụta oge na-ege ntị nke a n'ezie kediegwu usoro webinar - ị gaghị akwa ụta!
Tags: nkwurịta okwumarketingWebinar AhịammekọrịtaEgonri na mmekọrịtaNkwado ire ahịaigbe igbe
Ihe obula nke gha enyere m aka imuta ohuru
a na-anabata ihe niile. Obi dị m ezigbo ụtọ
na ịkekọrịtala ozi a. M
ga-enyocha ya. Daalụ maka
Na SukritInfotech, anyị na-ahụ na ebumnuche gị nke ọnụnọ weebụ wepụtara kpamkpam site na ọrụ ọrụ zuru oke anyị. Ọrụ anyị bara uru mana ọnweghị oke na mmepe sọftụwia, usoro ntinye aka nke websaịtị, ngwa weebụ, yana Portal Company Development. Site na nhazi usoro zuru oke nke ndị ahịa na ahụmịhe ngalaba siri ike, ndị ọrụ anyị nwere ikike ma zụọ ahịa na-anapụta ọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla n'agbanyeghị nha na mgbagwoju anya.